Tsy afa-bela ry zareo mpilalao lavalava - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Nikarakara hetsika goavana ireo mpanohana ny kandida Hery Rajaonarimampianina. Lalao baolina lavalava notontosaina teo amin’ny kianja ANS, Ampefiloha, ny sabotsy 19 okitobra teo izany. Fanamiana no natolotry ny avy amin’ny Hery Vaovao ho an’ireo ekipa 24 ireo ekipa lahy sy vavy ary amboara ho an’ny ekipa mpandresy. Isan’ny nahitana fa tena hetsika politika ilay natao dia maillot iray ihany no nasiana soratra “Hery Vaovao 3”. Io maillot tokana io kosa aloha no nasiana soratra Hery Vaovao fa tsy ny maillot rehetra. Izany hoe maillot iray isaky ny ekipa izany no nisy soratra. “Misy mahatsara ihany ny nataon’ireo mpanolotra. Azonay ampiasaina tsara izany ny maillot sisa mandritra ny taona fa tsy voafatotry ny soratra Hery Vaovao izahay” hoy ity mpilalao iray raha naneho ny heviny izy. “Fanohanana no nataonay satria nisy ny fangatahana. Mbola nisy koa ny amboara ho an’ireo ekipa nandresy. Tsy manery azy ireo hifidy ny kandida atolotray izahay na dia nanome tee-shirt misy ny sarin’ny olona tohananay” hoy Rasoarahona Solofo izay nanolotra ireo fanamiana ireo.
Nanaitra tokoa ny nahita an’ireto mpanohana kandida ireto nanolotra fanamihana ho an’ny mpilalao rugby. Malaza hatrizay fa hataon’ny mpanao politika fitaovana ny mpilalao rugby. Ampiasaina ho gros bras, ohatra, ireo mpilalao baolina lavalava. Soritana fa sokajy tanora ireto notolorana fanamiana ireto. Manaitra tokoa satria efa nilaza ireo mpilalao rugby fa tsy hanaiky hatao fitaovana intsony. Ny nanaitra farany dia tsy mba hita firy teo amin’ny tontolon’ny spaoro ny mpanolotra na ny kandida mihitsy. Marihina fa misy amin’ireo kandida ireo no fantatra fa mihosina amin’ireo mpilalao rugby fa tsy isan’izany ity kandida ity.
Ny alatsinainy 21 okitobra dia nitohy ny fanehoana finiavana hambabo ny fon’ny mpilalao. Nampanantenaina fa omena lelavola ireo rehetra nahatonga baolina enti-tanana (essai). Essai 15 teo no maty tamin’ireo lalao natao ny asabotsy tontolo andro. Samy nahazo ny anjarany io alatsinainy 21 okitobra io ireo nahatonga baolina enti-tanana araka ny nampanantenaina.
Ankoatra an’ireo mpilalao baolina lavalava izay notolorana fanomezana io alatsinainy io dia nahazo ny anjarany koa ireo mpikatroka kick boxing nandray anjara tamin’ny fifaninanana maneran-tany natao tany Brezila. Nisy 9 mianadahy izy ireo. Samy notolorana lelavola ihany koa izy ireo. Teto kosa dia nanamarika ny filohan’ny federasiona kick boxing fa efa hatramin’izay ny fanohanan’ny kandida Hery Rajaonarimampianina ny taranja kick boxing fa tsy vao izao akory. Mety marina izany saingy ny fampivadiana ny spaoro sy ny politika no olana. Azo natao tsara ny nanolotra ny fanomezana taorian’ny fifidianana satria efa foy ho an’ny mpikatroka ilay fanomezana. Io fampivadiana ny politika sy ny spaoro io no isan’ny fositra tsy ahombiazan’ny fanatanjahantena. Tsy ny manome no ratsy fa ny fotoana no tsy sahaza. Indrindra fa efa nanolo-tanana ny taranja kick boxing hatrany izany i Hery Rajaonarimampianina nandritra ny fotoana nahaminisitry ny vola ny tenany.